Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသိသူတွေမှာ ခြေမအနာဖြစ်ရင် ဖြတ်ပစ်ရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. ဆီးချိုသမားတွေက ခြေမအနာဖြစ်တာနဲ့တော့ မဖြတ်ပစ်ရပါဘူး။ ခြေမအနာဖြစ်ရင် ကိုယ်ရဲ့ခြေထောက်ကို မှန်ကိုကြည့်သလို နေ့တိုင်းကြည့်နေပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးရင်...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဟင်းသီးဟင်းရွက်အားလုံးနီးပါးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ပါပါတယ်။ တချို့တလေကတော့ ချက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ရေထဲပါသွားတတ်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် ပါဝင်နှုန်းမြင့်မားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို လျော့နည်းအောင် ဆီနဲ့ကြော်တာ ချက်တာမလုပ်ခင်မှာ ရေလုံပြုတ်တာ၊ ရေနွေးဖျောတာလုပ်ပြီး အဲဒီရေတွေကို သွန်ပစ်လိုက်ပါ။ အာလူးနဲ့ အမြစ်စားရတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုတော့...